China Umgangatho ophezulu wecamshaft mveliso kunye nabathengisi | USAMUWELI
Intloko yesilinda yezithuthi
Umgangatho ophezulu we-crankshaft efanelekileyo kwiRenaultR4
Umgangatho ophezulu wecrankshaft yemoto ilungele iRenaultE7J
Umgangatho ophezulu wemoto Flywheel
Uluhlu olupheleleyo lwee-crankshafts zeemoto zeCrankshaft
Umgangatho ophezulu weSilinda
Iimodeli zemoto ezifanelekileyo: IVolkswagen
Umzekelo: 038109101R / 038109101AH
Impembelelo yamandla: 1000 （mPa）
Ubungakanani bephakheji: 500 * 20 * 20
Inombolo yenqaku: YD358A
I-Camshafts yinxalenye ebalulekileyo ye-injini kwaye iqhagamshelwe kwi-crankshaft ngokusebenzisa imixokelelwane okanye amabhanti (ibhanti yexesha, amatyathanga exesha), ii-camshafts ziqhutywa zii-camshafts kwaye zilawula neevalvu. Obu budlelwane bulawula umoya kwimixube yezibaso (iinkqubo zesitofu sendabuko) kunye nokuphuma kwindawo yokusebenza kusetyenziswa amaxabiso.
Imveliso yenziwe nge-ductile yentsimbi ephezulu yonyango kwaye inyangwa ngobuchwephesha bokomeleza ityhubhu ukuphucula ukomelela kwecamshaft. Ilungele iimoto, iinqanawa, izithuthi zobunjineli, oomatshini bezolimo, iseti yejeneretha, umgangatho wokuqala, ngenkangeleko entle, uxinizelelo oluphezulu, ukutyibilika, ukukhanya kunye nokuqina emva kokugqiba. Imveliso nganye iye yavavanywa ngokungqongqo kwaye umgangatho wayo uqinisekisiwe. Ukupakishwa kwebhokisi kunembonakalo elungileyo kunye nomjikelo wemveliso ozinzileyo: iintsuku ezingama-20 ukuya ku-30 ​​zomsebenzi, ukupakisha okungathathi hlangothi / ukupakisha kwasekuqaleni, indlela yothutho: umhlaba, ulwandle kunye nomoya.
I-Camshaft isebenza kwezi zivalo ngee-lobes ezikwi-camshaft shaft ngokwazo, njengoko zijikeleza ngokucinezela iipavini ezantsi. Izivalo zilayishwe entwasahlobo (zinokunyanzelwa ukuba zenze umoya) kwaye zibuyele kwindawo yoqobo, zilinde ixesha elizayo xa i-lobes ijikeleza umjikelo, uqhubeke nomjikelo. Zombini i-air inlet kunye ne-exhaust outlet valves kwaye kuyilo oluthile lwe-injini njenge-DOHC (i-cam ephindwe kabini) inokuba neeseti ezimbini zevalvu kwindawo nganye engenayo okanye kwindawo yokuphuma.
Unokucinga ukuba i-crankshaft idityaniswe kwi-camshafts nge-cambelt, kwaye i-camshafts idityaniswe ne-valves, yonke isebenza ngokudibana. Ngexesha lemihla yokusebenza eqhelekileyo iprofayile ye-camshaft esemgangathweni inokulungelelaniswa neempawu ezithile ze-injini, kodwa kukho amaxabiso asetiweyo anokuthi atshintshe iprofayile ye-cam yokusetyenziswa kokusebenza- iHonda yaziwa ngokukodwa ngetekhnoloji enjalo.
Ukusilela okuqhelekileyo kweekhamhafethi kubandakanya ukunxiba okungaqhelekanga, ingxolo engaqhelekanga, kunye nokwaphuka. Ukunxiba ngokungaqhelekanga kunye neenyembezi zihlala zenzeka ngaphambi kwengxolo engaqhelekanga kunye nokwaphuka.
(1) I-camshaft ibekwe phantse ekupheleni kwenkqubo yokuthambisa i-injini, ke imeko ye-lubrication ayinathemba. Ukuba impompo yeoyile ayonelanga kunikezelo loxinzelelo ngenxa yokusebenzisa ixesha elininzi okanye ezinye izizathu, okanye ioyile yokuthambisa iyabhloka, ioyile ethambisayo ayinakufikelela kwi-camshaft, okanye i-torque yokuqinisa ye-cap eqinisa i-bolt inkulu kakhulu, ioyile yokuthambisa ayikwazi kungena umsantsa wecamshaft. Unobangela banxibe engaqhelekanga camshaft.
(2) Ukunxiba okungaqhelekanga kwe-camshaft kuya kubangela ukuba umsantsa ophakathi kwe-camshaft kunye nezindlu ezithwele ukwanda, kunye nokufuduswa kwe-axial kuyakwenzeka xa i-camshaft ishukuma, ikhokelela kwingxolo engaqhelekanga. Ukunxiba okungaqhelekanga kuya kukhokelela kukonyuka kwesithuba phakathi kwe-cam kunye ne-hydraulic tappet. Xa i-cam kunye ne-hydraulic tappet zidityanisiwe, impembelelo iya kubakho, ikhokelela kwingxolo engaqhelekanga.
(3) IiCamshafts ngamanye amaxesha zinokusilela okuqatha njengokuqhekeka. Oonobangela abaqhelekileyo kubandakanya iappap hydraulic ukuqhekeka okanye ukunxiba okunzima, ukuthambisa igrisi okungalunganga, umgangatho wecamshafts esemgangathweni, kunye nokuqhekeka kwecamshaft yexesha.
(4) Ngamanye amaxesha, ukusilela kwe-camshaft kubangelwa zizizathu zomntu, ngakumbi xa i-injini ingadityaniswanga ngokufanelekileyo xa injini ilungisiwe. Umzekelo, xa uqhaqha ikhava ye-camshaft, sebenzisa isando ukubetha ngamandla okanye usebenzise i-screwdriver ukukhupha uxinzelelo, okanye ufake ikhava ethweleyo kwindawo engalunganga, ukuze isiciko sokuthwala singahambelani nesihlalo sokuthwala, okanye i-torque yokuqinisa yesikhuselo sokuthwala isixhobo sokuqhobosha sikhulu kakhulu. Xa ufaka isiciko sokuthwala, nikela ingqalelo kwizikhombisi zendlela kunye neenombolo zokuma kumphezulu wekhava elinokuthwala, kwaye usebenzise isikrufu sokuqinisa ukuqinisa ukhuseleko lokuqinisa iibholiti ngokungqinelana ne-torque echaziweyo.
Umgangatho ophezulu wemoto camshaft:
Iimodeli zemoto ezifanelekileyo IVolkswagen
imodeli 038109101R / 038109101AH
Impembelelo yamandla 1000 （mPa）
Ubungakanani bephakheji 500 * 20 * 20
Inombolo yenqaku YD358A
Izinto eziphathekayo zenziwe nge-iron-high ductile iron kwaye zinyangwa ngobuchwephesha bokomeleza itekhnoloji ukuphucula ukomelela kokudinwa kwe-camshaft. Ilungele iimoto, iinqanawa, izithuthi zobunjineli, oomatshini bezolimo, umgangatho wokuqala, ngokubonakala okuhle, uxinizelelo oluphezulu, ukuguda, ukukhanya kunye nokuqina emva kokugqiba. Imveliso nganye iye yavavanywa ngokungqongqo kwaye umgangatho wayo uqinisekisiwe. Ukupakishwa kwebhokisi kunembonakalo elungileyo kunye nomjikelo wemveliso ozinzileyo: iintsuku ezingama-20 ukuya ku-30 ​​zomsebenzi, ukupakisha okungathathi hlangothi / ukupakisha kwasekuqaleni, indlela yothutho: umhlaba, ulwandle kunye nomoya.
Ilungele iimoto, iinqanawa, izithuthi zobunjineli, oomatshini bezolimo, umgangatho wokuqala.
Egqithileyo Umgangatho ophezulu weSilinda
Okulandelayo: Uluhlu olupheleleyo lwee-crankshafts zeemoto zeCrankshaft
EMzantsi Zongshizhuang Village, Zongshizhuang Town, Jinzhou City, Shijiazhuang City, Hebei kwiPhondo